Izinkampani ze- # 1 Reason Companies Ziyahluleka Ekusebenziseni Injini Yokucinga | Martech Zone
Izinkampani ze- # 1 Reason Complex zehluleka ku-Search Engine Optimization
Uma kukhona into eyodwa engicasulayo uma kukhulunywa ngayo ukusebenzisa ngokugcwele injini, kulapho umuntu ehlehlela emuva ekuguqukeni kwentuthuko noma isayithi ngoba funda okuthile kwenye indawo. Uma isayithi lakho limunca amazinga futhi ungakwazi ukuthuthukisa amazinga, kufanele ukwandise. Ukushiya isimo sesayithi ngoba nguwe funda okuthile kwenye indawo ikutholela imiphumela ngqo onayo manje… ayikho.
Isizathu # 1 sokuthi izinkampani zehluleke ukwenziwa kwezinjini zokusesha kungenxa ye- funda okuthile kwenye indawo izaba zokungenzi lutho. Esikhundleni sokusebenzisa izinsizakusebenza ekuthuthukiseni nasekuhlolweni, omunye unjiniyela uhleli egumbini elingemuva ehla izithangami zeGoogle ukuvikela umbono wakhe wokuthi akumelanga enze ngcono isiza. Kuyahlekisa.
Isenzo, inqubo, noma indlela yokwenza okuthile (njengokwakhiwa, uhlelo, noma isinqumo) njengokuphelele ngokuphelele, okusebenzayo, noma okusebenzayo ngangokunokwenzeka; ikakhulukazi: izinqubo zezibalo (njengokuthola ubukhulu bomsebenzi) ezibandakanyeka kulokhu. Isichazamazwi seMerriam-Webster
Izinjini zokusesha azinayo imithetho noma uhlu lokuhlola lokuqinisekisa ukuthi isayithi lakho lifaka kahle. Ithimba lakwaGoogle linikeze ngezinto eziyisisekelo ongazenza kanye namanye amathuluzi wokuqapha impumelelo yakho. Bazokutshela ukuthi uqiniseke ukuthi isayithi lakho lihamba ngeselula, qiniseka ukuthi liyashesha, qiniseka ukuthi awuzivimbi izinjini zokusesha ... , ama-alt tags, ukwakheka kwe-HTML, ukubethela, ukusetshenziswa kwegama elingukhiye, isigaba sabaphathi, njll.
Kepha abakutsheli konke okufanele ukwenze, bakweluleka nje ukuthi usebenzise indawo yakho. Ngakho-ke, kuphezu kwakho ukuhlola ukusetshenziswa kwezithombe, ukusetshenziswa kwamavidiyo, ukwakheka kwesiza, ukuzulazula, njll. Ukuze wenze kahle, kudinga ukuthi:
Act - lokho kusho ukuthi udinga ukwenza okuthile!
test - lokho kusho ukuthi udala indlela noma inqubo yokuhlola izinguquko.
Linganisa - lokho kusho ukuthi kufanele ulinganise imiphumela yezinguquko ozenzayo kusayithi ukuze ukwazi ukutshela ukuthi yini esebenzayo nengasebenzi.
Funda Okuthile kwenye indawo
Kunezinkinga ezimbalwa nge funda okuthile kwenye indawo izaba zokungenzi lutho:
The isikhathi iseluleko esanikezwa kungenzeka siphelelwe yisikhathi ngamasu wamanje wokusebenzisa izinjini zokusesha. Isibonelo, ungafunda i-athikili enhle ngokubhala… kepha ayisasekelwa yi-Google.
The umthombo yezeluleko kungenzeka zingahambisani ngokuphelele nezinkinga ongena kuzo. Mhlawumbe iseluleko sanikezwa isiza sebhizinisi, noma isayithi lendawo, noma isayithi elinokusetshenziswa okuphezulu kweselula… leso seluleko singasebenza noma singasebenzi noma sibe yinto ephambili kusayithi lakho.
Ngakho-ke… uyasebenza. Futhi uma usebenza nenkampani enkulu egcina amasu we-SEO, umthwalo ukhona ukuqinisekisa ukuthi awuyikhuhli. Kepha futhi banolwazi ngakho-ke asikho isidingo sokuthi iqembu lakho lihambe funda okuthile kwenye indawo.
The funda okuthile kwenye indawo izaba kufanele zihambe. Uzothola izizathu eziyizigidi kuwebhu zokungenzi lutho, kepha lapho okwenzile kungasebenzi, awunakulindela imiphumela ehlukile uze wenze izinguquko. Lokho kungukhiye wokusebenzisa kahle - qhubeka uvivinye izindlela ezahlukahlukene ukuze uthole ukuthi yini okusebenza kahle kakhulu. Ungalahli lutho ngaphandle kokuthi, ngokwesibonelo, i-Google inikeze imiyalezo ecacile yokuthi yini okumele uyenze noma ungayenzi. Isibonelo, i-Google ikutshele ukuthi ungalokothi ukhokhele izixhumanisi. Ngakho-ke ungakwenzi.
Konke okunye kuvulekele ukusetshenziswa. Yeka ukuza nezaba bese uqala ukusebenzisa indawo yakho manje!
Tags: Thatha isenzo!Linganisafunda okuthile kwenye indawoukusebenzisa ngokugcwele injiniindlela yokuseshainqubo yokwenza useshoseotest
5 I-imeyili Yamathrendi Omakhalekhukhwini Odinga Ukuwacabangela